Kufamba kwebasa: Chii icho, chinoshanda sei uye chii chandingaite nacho | IPhone nhau
Paul Aparicio | | IPhone maapplication
Chokwadi vazhinji venyu makanzwa nezvekushandisa kunodaidzwa Workflow. Kwete pasina, mu iPhone News isu takatoburitsa zvimwe zvinyorwa nezve ichi chishandiso uye nguva dzose nemazwi akanaka. Asi mutengo wekushandisa (€ 4.99 kunze kwekusimudzira) uye kushomeka kwezivo nezvekushandisa kwayo kana zvazvingaite zvinogona kutinonokera uye kusawana chikumbiro chakakodzera, asi zvakanyanya. Iko kunyorera kwaifanira kuve kwakagadzirwa neApple pachako, kubvira inotaridzika zvakanyanya seMac app, Automator.
Muchikamu chino ini ndichaedza kutsanangura zvinhu zvakati wandei nezveKufamba kweBasa kuitira kuti mamwe mapoinzi nezvekushandisa ave akajeka kwauri. Asi, sekutarisa, ini ndichakuudza kuti inoshanda gadzirisa zviito zvinogona kunyange kupfuura zvimwe zvirambidzo zveIOS, senge, semuenzaniso, kugona kutumira anopfuura mapikicha mashanu neemail kana kutumira nziyo neTeregiramu kana Tsamba (neWhatsApp hazvigoneke nekuti hazvienderane). Asati WhatsApp atumira mafoto kubva mupumburu, Workflow yakatibvumidza nekuwedzera.
1 Chii chinonzi Workflow
2 Mashandiro Ekushanda anoshanda sei
3 Chii chandingaite ne Workflow
3.1 Wona chero faira
3.2 Tweet rwiyo rwatiri kuteerera
3.3 Skena uye gadzira QR kodhi
3.4 Dudziro Chinyorwa
3.5 Tumira nziyo
3.6 Bhurawuza iCloud Drive
3.7 Tumira anopfuura mashanu mafoto netsamba
3.8 Gadzira iyo GIF kubva kune akawanda mafoto
3.9 Rega iyo iPhone itiverengere zvinyorwa
3.10 Rongedza mifananidzo neAviary
3.11 Dhawunirodha mavhidhiyo nemimhanzi kubva kuYouTube
3.12 Dhawunirodha webhusaiti muPDF uye uiendese kuBooks
3.13 Tweet maGIF kubva kune reel, gadzira maGIF kubva kumavhidhiyo, uye utarise ese maGIF pane reel
3.14 Tsvaga mota yangu
3.15 Export inononoka kufamba mavhidhiyo
Chii chinonzi Workflow
Kufamba kwebasa, sekureva kwezita, kuri chishandiso che "workflows". Zvichatibatsira gadzira zviito kana kuwedzererwa kuita zvese zvese. Zvakanakisa pane zvese izvo zviito zvinogona kusanganiswa nemumwe, iyo ichatibvumidza isu, semuenzaniso, kugadzira chifananidzo tobva tagovana paTwitter, zvese tisingasiye iyo «mini application». Kuwedzera kune zvakajairika mafashama, tinogona kugadzira zvinowedzera iyo yatino "daidza" kubva kubhatani rekugovana (
). Semuenzaniso, kurodha pasi YouTube mavhidhiyo kubva kuSafari.
NOTA: Kuti tishandise izvo zvinowedzera nekukanda bhatani rekugovana, kutanga tinofanirwa kubaya "Zvakawanda" uye kumisikidza iyo "Run Workflowflow" sarudzo, kana tisina iyo yakamisikidzwa.
Mashandiro Ekushanda anoshanda sei
Kufamba kwebasa kune poindi yakanaka iyo zviito zvakapusa uye zviito zvine padanho repamberi zvinogona kugadzirwa. Sezvauri kuona mumifananidzo pazasi pemitsara iyi, isu tine maviri tabo: «Zviito» uye «Kubuda Kwemabasa». Izvo isu zvatinofanirwa kuita kuenda ku "Zviito" tebhu uye kuvadhonza (kuchengeta munwe pane chiito) kune iyo Workflow tebhu. Izvi zvinotsanangurwa kekutanga nguva yatinovhura application, patinomanikidzwa kugadzira applet yekugadzira animated maGIF kubva kumafoto akasiyana. Chaizvoizvo, kushanda kwese kuri nyore, kunyangwe zvikave zvakati omei kana tichida kuita chimwe chinhu chakaomarara. Asi chinhu chakanaka ndechekuti kune nharaunda yevashandisi vanogadzira kufambiswa kwemabasa mazuva ese uye zvakaburitswa pawebhu mumudra-bcs.de. Ini ndinokurudzira kuti iwe uite seni, ndiko kuenda kune iyo webhusaiti, shandisa vamwe vanhu mafasiflow uye uone maitirwo azvo.
Ramba uchifunga kuti kune mhando mbiri dzekufashukira kwemabasa: mashandisiro, atinogona kuvhura nekupinda Workflow uye kaviri-kubaya pane chishandiso kana kubva kuChitubu cheBoard kuwana (kana takazvigadzira), uyezve isu tine izvo zvinowedzerwa, izvo isu inogona kuvhura kubva kune zvimwe zvinoshandiswa, senge kurodha pasi YouTube mavhidhiyo.
Chii chandingaite ne Workflow
Chaizvoizvo zvese. Kunyangwe iwe uchikwanisa kuwedzera zvimwe sarudzo, uyezve ivo vanogona kuwedzera zvimwe zvandabvunza, Workflow ine zviito zvakawanda zvinogona kubatanidzwa pamwe chete kuitira kuti yedu iPhone isanyanya kushomeka pane iyo isina iyi application. Chinhu chakanakisa kuziva zvaungaite neKufamba kweBasa ndechekuti iwe unoshanya padandemutande randakakupa kare kana, izvo zvandiri kuzoita, izvo zvandinogovana nemi mese mafambisirwo emabasa uye mawedzero andinayo pane angu iPhone. Ini ndinofanira kubvuma kuti mamwe akareruka sezvinobvira (senge kuTwitter maGIF), asi ivo vanoita basa.
Wona chero faira
Ini ndichatanga neyakareruka yakapusa, asi inoshanda kwazvo kuwedzera. Ndiri kutaura nezve Preview. Nekuwedzera uku tinogona kuona chero chero faira ratinaro pane yedu iPhone. Inoshanda chaizvo sekushandisa kwatinoita muMac OS X kana tikabata bhawa renzvimbo kana isu tine faira rakasarudzwa. Nekutarisa isu tinogona kuona kusvika kumaGIFs kubva kureel, zvakare ichitibvumidza kuona mavhidhiyo, teerera kumimhanzi, ona zvinyorwa ...
Tweet rwiyo rwatiri kuteerera
Mune yakachena #NowPlaying maitiro, tinogona kuTwitter rwiyo rwatiri kuteerera narwo rwemunhu meseji (rwiyo, muimbi, emoji ...) nemufananidzo weakavhavharo.
Skena uye gadzira QR kodhi
Hatidi kuve nechikumbiro chekutarisa QR kodhi. Tinogona kuaverenga kubva Workflow (uye, kana iwe ukaverenga webhu, iwe unogona kuiita kuti iende kwariri kubva kune imwechete yekufambisa). Uye zvakare, iwe unogona kugadzira QR kodhi kuti isu titumire "zvishoma zvakavharidzirwa encrypt" mameseji.
Tine chishandiso chinowanikwa kuturikira zvinyorwa. Inoshanda zvakafanana nezvakawanda zvinoshandiswa muApp Store, asi kana isu tatova neKufamba kweBasa, tinogona kuita pasina vamwe.
Kana iyo application ichienderana nekutumira mafaera, tinogona kutumira nziyo kubva Kubasa Kufamba. Ndakaiyedza nekuvatumira netsamba uye neTeregiramu uye inoshanda nemazvo.
Bhurawuza iCloud Drive
Kumwe kwekunyunyuta kwevashandisi kubva pakauya iOS 8 kusashanda kweICloud Drive. NeWorfkflow tinogona kufamba kuburikidza neICloud mafolda uye kubvunza mafaera pasina chikonzero chekushandisa zvinoshandiswa kubva kuApp Store, nekuti zviine zvese zvinofamba zvishoma nezvishoma. Tinogona kubvunza mafaira uye kuvhura iwo mukushandisa izvo isu zvinoratidza.
Tumira anopfuura mashanu mafoto netsamba
Chimwe chinorambidzwa kubva kuApple, uye ini ndiri kufunga kuti ndezvekudzivirira chirongwa chedu che data, ndechekuti isu hatigone kutumira anopfuura mapikicha mashanu. Ne Workflow, uyu muganho haupo.
Workflow Tsamba + 5Photos
Gadzira iyo GIF kubva kune akawanda mafoto
Zvichienderana nebasa rakagadzirwa, tinokwanisa kusarudza akawanda mafoto kubva kune reel kuti tiite GIF kana isu tinogona kutora akawanda mafoto tisati taigadzira. Kuita kwandinokuunzira ndekwemhando yechipiri, yakafanana chaizvo neiyo Jittergram application.
Rega iyo iPhone itiverengere zvinyorwa
Tinogona kuita kuti iPhone itiverengere manyore akapinda nemaoko Inogona kuuya inobatsira kana tichida kutsvaga nezvechimwe chinhu chatisingakwanise kuverenga pane imwe nguva. Nenzira imwecheteyo, isu tinogona kuve newebhusaiti kuverengerwa isu.
Workflow Verenga Chinyorwa
Kuwedzeredza Verenga Webhu
Rongedza mifananidzo neAviary
Ichi chiwedzero chinogona kuuya chinobatsira kana isu tichida kugadzirisa mufananidzo nenzira isingabvumirwe neyekuzvarwa application. Semuenzaniso, kuratidzira iwo mufananidzo kuti uchinje maitiro ayo. Kunyangwe ini ndachidaidza kuti "kugadzirisa nekukurumidza", zvinogona kunge zvisiri kukurumidza dzimwe nguva, hongu.
Kuwedzeredza Kurumidza Hora
Dhawunirodha mavhidhiyo nemimhanzi kubva kuYouTube
Chinhu chingafadze vanhu vazhinji, asi havawanzo kuwana chishandiso kana iyo modhiyo. Ne Workflow isu tinogona kuzviita zvese. Chinhu chakashata nezvemumhanzi ndechekuti haiende kuMusic application, zvikasadaro tichafanira kusarudza mumwe mutambi kuti avhure.
Kuwedzeredza kubva kuYouTube kuenda kuReel
Kuwedzeredza YouTube kune MP3
Dhawunirodha webhusaiti muPDF uye uiendese kuBooks
Tinogona kushandura webhusaiti kuita PDF nekuivhura yakananga mumaBooks. Kunyangwe, zvine musoro, iyo webhu haina kurodha zvakafanana, izvo zvirimo (zvinyorwa, zvinongedzo uye yakawanda kwazvo mifananidzo) inogona kubvunzwa pasina matambudziko.
Kuwedzeredza Kubva paWebhu kuenda kuBooks
Tweet maGIF kubva kune reel, gadzira maGIF kubva kumavhidhiyo, uye utarise ese maGIF pane reel
Sarudzo yandisinganzwisise sezvo isingawanikwe natively. Kufamba kwebasa kunouya kununura zvakare uye kunotibvumidza isu kutumira chero GIF yatinayo pane reel (kana kumwe kunhu, asi kuwedzerwa kwaizofanira kuchinjwa). Uye zvakare, isu tinogona kugadzira GIF kubva pfupi vhidhiyo (marefu akarembera application) uye ona ese maGIFs atinawo pane reel pasina kuatsvaga iwo mumwe neumwe.
Kuwedzeredza Tweet maGIF kubva kuna Reel
Workflow Gadzira GIF kubva kuVhidhiyo
Workflow Reel GIF Muoni
Tsvaga mota yangu
Nenzira imwechete iyo zvimwe zvinoshandiswa muApp Store zvinoshanda, neFoodflow isu tinokwanisa kuchengetedza chinzvimbo chemota yedu uye, gare gare, tevera nzira yekudzoka uchishandisa Apple mepu.
Workflow Tsvaga mota yangu
Export inononoka kufamba mavhidhiyo
Kana iwe uchinge uine matambudziko ekugovana mavhidhiyo mune inononoka kufamba, Workflow ichatibvumidza isu kuchengetedza mavhidhiyo muSlow Motion kuitira kuti vagone kuonekwa mune chero mutambi (akakosha: mune CHEMA chero mutambi, webhu, sevhisi ...).
Kuwedzeredza Export Slow Motion
Sezvauri kuona, iwe unogona kuita zvachose zvese. Uku ndiko kufashukira kwebasa kwandinoshandisa, asi iwe unogona kuita zvimwe zvakawanda. Usarega kushanyira webhusaiti iyo yandakakurudzira kare uye iwe unonzwa kuti yako iPhone haina miganho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kufamba kwebasa: Chii icho, kuti inoshanda sei uye chii chandingaite nayo
Zvakanaka kutumira! Izvo zvakafanana neiyo IFFFT app? Wakamboshandisa iyo yekupedzisira here? Handina kumbobvira ndabuda. Ndiri kuona kuti ese ari maviri anoshandiswa kugadzira "mabikirwo." Ndichavatora kuti vaedze, vandibata.
Manheru akanaka, gaxilongas. Ivo havana kufanana. Ndakaedza zvese uye IFTTT (ikozvino IF) ndeyekuti kana iwe ukaita "chimwe chinhu", zvinongoerekana zvaita "chimwe chinhu". Semuenzaniso, kana iwe ukawedzera wekubata kukerenda yako, chiyeuchidzo chinogadzirwa kuti iwe uite kopi yekubatana. Kana ikatanga kunaya, iwe unowana chiziviso. Kune rimwe divi, Workflow ndeyekuti, zvikanzi nekukurumidza, iwe unogadzira zvaunoshandisa. Semuenzaniso, kugadzira zvinofamba maGIF kana kutsvaga mota yako.
Kutenda nekujekeswa Pablo. Kwaziwai!
WOW PABLO, HANDI KUZIVA KANA WAKAZVIITIRA KUKUMBIRA KUTI NDAKAKUKUMBIRA IZuro MUPOSITI KUTENGA MAVHIDZO MUKUNONOKA KAMERA, ASI ICHOKWADI NDINOKUTENDAI ZVIKURU, KUNYANYA KUNYANYA ASI PASI PASI PESE YEMAHARA Blog! NDinovaverenga SEZVINOBVA KUNE 3 ANENGE 4 MAGORE, KUKWazisaI KUVENEZUELA !!!
Muchidimbu, hongu 😉 ndanga ndichiona kunaka kwakaita iko kunyorera kwechinguva uye mhinduro yako yakandipa yekupedzisira Push yekuigovana nemunhu wese.
EEEH PABLO YAKANAKA POST, ndanga ndisingazive kuti yakashandiswa sei, ikozvino nekuda kwetsananguro dzawakapa, ndinozvinzwisisa zviri nani !! Ndatenda !!
Ndinotanga zvakanaka. Ndanga ndichida kuyedza kwenguva yakareba uye ini ndazopedzisira ndaita pfungwa dzangu. Ini ndinoiisa uye haina kunditendera kuti ndiende kubva pakutanga, iripi dzidziso yekugadzira iyo Gif. Icho chokwadi ndechekuti ini ndinoenda kuZvirongwa uye hapana chinoonekwa mukati mekushandisa chero (ini ndaida kuona kana ndakapihwa mvumo yekushandisa kamera uye kushandisa mifananidzo kubva mufirimu)
Izvi zvakajairika? Zvandinoita? Zvingave zvine chekuita nenyaya yekuti ndine beta 2 yeIOS 8.4? Ngatione kana uchikwanisa kundibatsira, ini handizive zvimwe zvekuyedza ...
Kugadziriswa. Ini ndakakwanisa kusvetuka nhanho kurodha rwizi kubva pawebhu
Ini ndatenga iyo yekushambadzira application asi kana iwe ukaivhura iyo inondiudza kuti ndiise pikicha uye kubva ipapo hazviitike, haina kuvhura chero zvemukati
Mhoro, Hilario. Iko kutanga kwakashata, asi ndeyekutidzidzisa mashandisiro ekushandisa application. Ini handirangariri kana iwe uchikwanisa kuenda-kumberi izvozvi pasina kutevera iyo dzidziso, asi kana iwe usingakwanise, ita zvazvinokuudza iwe. Iwe unofanirwa kugadzira iyo muenzaniso kufambiswa kwemabasa kuti ugone kuenderera.
Pablo kwaziso, asi kana ndikamupa kuti aenderere mberi anondiudza kuti kana ndichida kutora pikicha asi kubva ipapo hazviitike uye hapana chinoonekwa, kana iwe uchiziva zvekuita, ndiudze
Chinhu chekutanga chandingaedze kuisunungura uye kuisazve. Kana zvichiri zvakafanana, kumanikidza reboot kuti uone kana kamera yakabatwa.
Ndakazviita chaizvo seizvi katatu, ndichaedza kutangazve uye ndione zvinoitika, Pablo
yerani ceron (@ ceron23yers) akadaro
mubvunzo chii chingave chiri chekufambisa software
Pindura yerani ceron (@ ceron23yers)
GADZIRA APP KUDZIDZA IPA USINA KUSAYINWA, NDIKO NDINE MATAMBUDZIKO NEZVINOSANGANISIRA PUSH, NDINOGAMUCHITIRA KUZIVISWA KUSVIRA NDAKAZARURA KUSHANDA .... ZVANDINODA KUTI NDIZIVE KUTI NEKUSHANDIRA NDINOGONA KUZIVA KUSVIRA KUTI "VHURE" ZVEZVIMWE NGUVA GAMUCHIRA ZVIZIVISO PANGUVA IYI UYE HAUFANIRI KUMIRA PAMWE CHETE NGUVA KANA CHIMWE CHINOSVIKA. WAITA HAKO
Mhoroi, chimwe chinhu chakakosha ndechekuti kuti ndizive zvese izvo chichemo ichi chatinounzira, ndinofanira kunzwisisa mutauro, izvozvi ndinazvo muChirungu, asi ndingaite sei kuti ndishandure mutauro uyu uve wechiSpanish ??? Ndinoonga iwe unogona kundibatsira.
Rocio Munoz akadaro
Ini ndinovhura kuyerera kwebasa uye ini handizive kuti ndeipi yekusarudza kurodha mavhidhiyo, hapana kana chimwe chazvo chinonzwika kwandiri, ndinoreva revenge dzinomhanya, ini handiwane zvinopfuura izvo
Pindura rocio munoz
Zvakanaka, pachangu, kufambiswa kwebasa uku kwakaita chimwe chinhu chakandiomera, ndakashandira iyi kambani uye zvakandibatsira uye nekure kure kugadzirisa dambudziko rangu, pano ini ndasiya chinongedzo chako https://www.dokuflex.com/